सभापति बन्न देउवालाई ११ मत पुगेन, दोस्रो चरणको चुनाव हुने | MYAGDINEPAL
Home / राष्ट्रिय समाचार / सभापति बन्न देउवालाई ११ मत पुगेन, दोस्रो चरणको चुनाव हुने
सभापति बन्न देउवालाई ११ मत पुगेन, दोस्रो चरणको चुनाव हुने
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिको चुनावमा पहिलो भएका छन् । तर, ११ भोटले सभापति बन्न भने चुकेका छन् । अब दोस्रो चरणको चुनाव हुनेछ ।
अब सोमबार हुने दोस्रो चरणको चुनावमा देउवा र उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
आइतबार भएको मतदानमा ३ हजार १४८ मत खसेको थियो । कांग्रेसको विधानमा सभापति हुन बुहमत (५० प्लस एक) आवश्यक पर्ने व्यवस्था भएकाले विजयी हुने १ हजार ५७५ मत चाहिन्थ्यो ।
तर, देउवाले १ हजार ५६४ मत ल्याए भने कार्यबाहक सभापति समेत रहेका पौडेलले १ हजार १५४ मत ल्याएका छन् । अर्का उम्मेदवार कृष्ण सिटौलाले भने ३२४ मत मात्र ल्याएका छन् । १ सय १ मत भने बदर भएको छ ।
अब दोस्रो चरणको चुनावमा सिटौला उम्मेदवार हुने छैनन् । देउवा र पाैडेलबीच हुने प्रतिस्पर्धामा ५१ प्रतिशत मत नल्याए पनि जसले बढी मत ल्याउँछ, उही विजेता हुने कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था छ ।
कांग्रेसको 'किङ मेकर' बन्ने ठाउँमा आइपुगे कृष्णप्रसाद
नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि भएको चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन सकेनन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा मात्र ११ भोटले सभापति निर्वाचित हुनबाट चुके । कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल दोस्रो भए भने अर्का उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला ३ सय २४ भोट मात्रै ल्याएर तेस्रो भए ।
के थियो सिटौलाको रणनीति ?
निवर्तमान महामन्त्रीसमेत रहेका सिटौला संस्थापन समूहमा नअटाएपछि दोस्रो हुने लक्ष्यका साथ चुनावमा होमिएका थिए । तर, परिणाम सोचेजस्तो भएन । उनी तेस्रो भए, जुन कुरा मतदानको दिनसम्म आइपुग्दा स्वयंम सिटौला र उनको टीमले पूर्वअनुमान लगाइसकेको थियो ।
यो चुनावमा सिटौलाको सफलता भनेको आफू तेस्रो भएर पनि सभापतिको चुनावलाई दोस्रो चरणमा पुर्‍याउनु हो
महामन्त्रीमा गगन थापा र कोषाध्यक्षमा उमाकान्त चौधरीको टीम बनाएर चुनाव लड्दै गर्दा सिटौलालाई करिव ८ सय मत ल्याउँछु भन्ने लागेको थियो । उनको माहोल पनि बन्दै गएको थियो । तर, संस्थापन समूहका ठूला नेताहरुको साथ नपाएपछि सिटौला एक्लिँदै गए । सुरुमा उनलाई साथ दिनेहरु नै खुलेर लाग्न सकेनन् ।अन्ततः तेस्रो हुँदै गर्दा सभापतिका उम्मेदवार सिटौलाले अनुमान गरिए भन्दा निकै कम मत ल्याए ।
जे होस्, यो चुनावमा सिटौलाको सफलता भनेको आफू तेस्रो भएर पनि सभापतिको चुनावलाई दोस्रो चरणमा पुर्‍याउनु हो । यसले पार्टीमा नयाँ शक्ति केन्द्र बन्ने प्रयासमा एक हदसम्म उनलाई बल पुगेको छ ।
‘किङ मेकर’ बन्लान् त ?
सभापतिको चुनाव अब दोस्रो चरणमा पुग्यो । अब शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दोस्रो चरणको चुनाव आजै हुनेछ ।
अब धेरैलाई चासो छ कि दोस्रो चरणमा सिटौलाले कसलाई समर्थन गर्लान् ? पहिलो चरणमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा सिटौलाले रामचन्द्र र अाफूमध्ये जाे तेस्रो हुन्छ, उसले संस्थापन समूहको उम्मेदवारलाई इमान्दारितापूर्वक समर्थन गर्नुपर्ने बताउने गरेका थिए । अब उनी यसमा कत्तिको अडिन्छन् हेर्न बाँकी छ । उनी याे पूर्वअडानमा रहे भने सिटौलाको अबकाे समर्थन रामचन्द्रलार्इ हुनेछ ।
तर, सिटौलालाई कुनै पनि निर्णय लिन सहज छैन । सभापतिका उम्मेदवार देउवालाई केवल ११ मत पुगेको छैन । यदि सिटौलाले समर्थन गर्नेर् हो भने चुनावअघि नै देउवालाई विजयी घोषणा गर्दा फरक गर्दैन । र, देउवालाई यसरी सहजै समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगे भने सिटौला कांग्रेसमा ‘किङ मेकर’ हुनेछन् । यसमा देउवाले सिटौलालाई संसदीय दलको नेता वा अरु कुनै आकर्षक पुरस्कार पनि दिन सक्नेछन् सिटौलालाई ।
अहिलेकै गणितलाई आधार मान्ने हो भने दोस्रो चरणमा सिटौलाले नसघाए पनि देउवाले जित्ने सम्भावना छ । तर, सिटौलाको मत थपिएर मात्रै पौडेलको जित सुनिश्चित हुँदैन, उनले देउवा पक्षको समेत मत तान्नुपर्ने हुन्छ
सिटौलाले संस्थापन पक्षमै मतदान गर्ने निर्णय गरे भने सिटौला ‘किङ मेकर’ हुने सम्भावना अलि कमै छ । किनभने सिटौलाले चाहेर पनि उनको मतले मात्रै पौडेललाई सभापति बनाउने सम्भावना निकै कम छ । किनकि पौडेल र सिटौलाले पाएको मत जोड्दा पनि देउवालाई भेट्ने छैन । र, देउवालाई अपुग भएको ११ मत मात्रै हो ।
अहिलेकै गणितलाई आधार मान्ने हो भने अब दोस्रो चरणमा सिटौलाले नसघाए पनि देउवाले जित्ने सम्भावना छ । तर, सिटौलाको मत थपिएर मात्रै पौडेलको जित सुनिश्चित हुँदैन, उनले देउवा पक्षको समेत केही मत तान्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, देउवाको हकमा भने उनले कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मतमात्रै थप्न सक्ने हो भने जित्ने सम्भावना ९९ प्रतिशत हुनेछ । किनकि दोस्रो चरणमा देउवाको आफ्नो मत कायमै रहन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
पौडेलको भोट किन अपेक्षाकृत कम ?
१२ औं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएका सुशील कोइरालाले १६५२ मत ल्याएका थिए । तीन उम्मेदवार रहेको उक्त महाधिवेशनमा दोस्रो भएका देउवाले १३१७ मत पाएका थिए । भीमबहादुर तामाङले ७८ मत ल्याएका थिए । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा संस्थापन पक्षको भोट घटेको छ भने देउवा बढेको छ ।
यसपटक संस्थापन पक्षका सिटौलाजस्तै अघिल्लो चुनावमा सुशीलविरुद्ध संस्थापन पक्षकै तामाङले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, भीमबहादुर भन्दा सिटौला निकै शक्तिशाली उम्मेदवार परे । भीमबहादुरले सुशीलको जितलाई पहिलो चरणमै रोक्न सकेका थिएनन्, तर सिटौलाले रोके ।
पौडेल र सिटौलावीच दोस्रो हुनका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो । दुबैले प्रथम चरणमा पहिलो हुने प्रयास नै गरेनन् । संस्थापन समूहका रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो सबै समय सिटौलाको भोट घटाउनमै खर्चिए । परिणामतः सिटौलाको केही भोट त घट्यो तर, शेरबहादुर समूहका मान्छे तान्ने वा जान लागेका संस्थापनका मतदातालाई रोक्ने काम गर्न सकेनन् । र, अब सिटौलालाई जोड्दा पनि देउवालाई हराउन नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् पौडेल ।
तर, यसको अर्थ दोस्रो चरणको चुनावमा पौडेलको जित्ने सम्भावना पूरै सकिइसक्यो भन्ने पनि होइन । सिटौलातर्फको मत र देउवा पक्षमा परेको अस्थिर मतलाई आकर्षित गरे भने पौडेलको अन्तिम प्रयासले देउवाको जितलाई केही असहज बनाइदिने झिनो सम्भावनालाई पनि अहिल्यै अस्वीकार गरिहाल्नु हतारो हुनेछ ।